राष्ट्रियसभा चुनावको नतिजा सार्वजनिक, कहाँ कुन पार्टीको कति सिट ?
ARCHIVE, POLITICS » राष्ट्रियसभा चुनावको नतिजा सार्वजनिक, कहाँ कुन पार्टीको कति सिट ?
काठमाडौं - राष्ट्रियसभा चुनावको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । उक्त चुनाव बुधबार सम्पन्न भएको थियो । राष्ट्रियसभा सदस्यका कुल ५९ सिटमध्ये ५६ जना निर्वाचित भएका छन् भने बाँकी ३ जना सरकारले मनोनयन गर्नेछ ।
राष्ट्रियसभा सदस्यमा २४ जना निर्वाचन अगाडि नै निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका थिए । बुधबार ३२ सिटका लागि मतदान भएको थियो । प्रदेश २ मा कूल ८ सिटमध्ये सबैजना निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए भने बुधवार प्रदेश नम्बर १, ३, ४, ५, ६ र ७ मा मतदान भएको थियो ।
परिणाम अनुसार, एमाले २७, काँग्रेस १३, माओवादी केन्द्र १२, फोरम र राजपा २-२ सिटमा विजयी भएका छन् । वाम गठबन्धनको स्पष्ट वर्चस्व देखिएको छ ।
यस्तै सङ्घीय लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चले भने राष्ट्रिय सभा निर्वाचन बहिष्कार गरेको छ । प्रदेश नम्बर २ मा बाहेक सबै प्रदेशमा सम्पन्न निर्वाचन पार्टीको निर्णयअनुसार बहिष्कार गरिएको उक्त पार्टीका संसादले बताएका छन्।
लिम्बुवान मञ्चले विराटनगरमा सम्पन्न प्रदेश १ को निर्वाचनमा मतदान नगरी चुनाव बहिष्कार गरेको हो । पार्टीको तर्फ सहभागी १ जना सांसदले भोट नहाली बहिष्कार गरेको लिम्बुवानले जनाएको छ ।
सङ्घीय लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चको प्रदेश १ मा एक जना मात्रै समानुपातिक सांसद बनेकी विष्णु तुम्बाहाम्फेले पार्टीको निर्णय नै भोट नगर्ने बताएकी थिइन् ।